Amin'ny anaran'IRAY no hiaonan'ny GasyTsyVery rehetra eto Frantsa aty MONTPELLIER amin'ny 03 - 4 àry 5 Avril ho avy izao. Fihaonana hampahatsiahivana fa TOKANA ny fiaviana. Telo andro natao hanadinoana fotom-pinoana. Telo andro tsy hanehoana firehana ara-paolitika. Ary Telo andro hanamafisana fa na dia aty am-pita aza ny GASY, tsy very.
Dia hoy aho hoe: ''ho tanteraka anie izany"
Lalao, korana, fanatanjahan-tena ...35 taona izao no nisian'ny RNS teto Frantsa ka azo lazaina fa tokony hampidirina ao anatin'ny ''fomban-drazana'' izy ity satria ''mbola tsy hita izay maha ratsy azy''.
RNS Tsikeraina... hosoram-potaka nefa ankamamiana.
Tsy moramora ny mandamina fihaonam-be toy izao, satria mila vola, mila hery mila fotoana àry mila fandavan-tena. Noho izany dia tsy maintsy misy hatrany ny indro kely sy ny ''Indro be" àry ny madilana ho tetenina. Voasoratra sy misoritra eny amin'ny resaka ataon'ny olona eny amin'ny ''forums'' sy vondrona isan-karazany ny tsy fahafaham-pon'ny tsirairay... Somary masiaka indraindray ...kanefa be ronono.
Kômity tena mambra !
Ireny olona ireny mantsy te hanana ny tsara ka tsy mitsitsy rotsa-paiso. Na izany aza, matoa 35 taona aty ao aoriana mbola mijoro ny RNS dia noho ny fahaizan'ny Komity mpandrindra mandray ireny tsikera ireny ho anatra. Tsy adino ihany koa anefa fa izay tsy manao ihany no tsy voatsikera.
Koa mamporisika sy midera hatrany ny Komity mpandrindra izahay noho ny Asa vita hatrizay sy ny ezaka rehetra hanambarana ny Malagasy rehetra aty dilam-bato.
Ho an'ny mpandray anjara rehetra
Tadidio fa ny antsika FIRAHALAHIANA aloha vao FIFANINANANA, koa aoka izay resy tsy hakoraina àry izay mandresy tsy hobiana.
NY FIRAISANTSIKA HINA NO TENA FANDRESENA
Ny GASY TSY VERY